radio himilo | Radio Himilo | Page 20
Home / Author Archives: radio himilo (page 20)
radio himilo November 8, 2017	Features, Wararka Leave a comment 66 Views
Muqdisho – Gudaha magaalada Hanoi, dalka Fitnam, hindise da’yar oo lagu magacaabo Dinh Thang ayaa helay hal-abuur xal noqon kara. Halkii la iska xoori lahaa walxaha tilmaanta u ah xiriirkii dheeliyay ee labada lammaane ka dhaxeeyey sida waraaqaha jaceylka iyo ...
Arsenal oo dib u soo nooleyneysa xiisaha ay u qabto Rafinha
radio himilo November 8, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 33 Views
Muqdisho – Arsenal ayaa lagu soo waramayaa inay diyaar u tahay inay dib usoo nooleyso xiisaha ay u qabto ciyaaryahanka khadka dhexe ee Barcelona, Rafinha. Gunners ayaa lala xiriirinayey inay u dhaqaaqeyso 24 jirkan xagaagii hore, laakiin waxay ku guuldareysatay ...
Mesut Ozil oo heshiis cusub la galaya Arsenal.
radio himilo November 8, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 31 Views
Muqdisho – Mesut Ozil ayaa lagu soo waramayaa inuu diyaar u yahay inuu qandaraas cusub u saxiixo Arsenal haddii loo dhiibo lambarka 10aad oo uu hadda xiran yahay Jack Wilshere. 29 jirkan ayaa qandaraaskiisa Gunners uu dhacayaa dhamaadka xilli ciyaareedkan, ...
Barcelona oo sare u dhigtay xiisaha ay u heyso saxiixa Matthijs de Ligt deal
Muqdisho – Barcelona ayaa lagu soo waramayaa inay sare u qaadday xiisaheeda daafaca dambeedka dhexe ee Ajax, Matthijs de Bentle. 18 jirkan ayaa xilli ciyaareedkii hore lagu soo daray kooxda koobaad ee Ajax, iyadoo kooxda reer Holland ay gaartay finalka ...
radio himilo November 8, 2017	Features, Wararka Leave a comment 47 Views
Muqdisho – Matxafka Xiriirada Go’ay wuxuu kamid yahay goobaha si la yaabka leh loogu dalxiiska tago caalamka. Halkan, dadka imaanaya waxay u riyaaqaan daawashada dhammaan nuucyada sheekooyinka iyo agabyada xusuusashada leh oo ay ku deeqaan dadka qalbi-jabku soo gaaro ee ...
radio himilo November 8, 2017	Features, Wararka Leave a comment 48 Views
Muqdisho – Chen Ming, oo ah da’yar ku nool Shenzen, dalka Shiinaha ayaa dhawaan soo jiitay indhaha dadka la dhacsan isticmaalka telafoonnada iPhone-ka kadib markii uu 25 xabo oo cusub usoo iibsaday si uu astaan jaceyl ah ugu sameeyo gabadha ...
Andrea Pirlo oo ku dhawaaqay inuu ka fariistay cayaaraha kubadda cagta.
radio himilo November 6, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 36 Views
Muqdisho – Andrea Pirlo ayaa ku dhawaaqay inuu ka fariistay kubadda cagta isla markaana uu soo gaba gabeeyey cayaaraha. 38 jirkan ayaa shaaciyay go’aankiisa ka dib markii uu bedel kusoo galay kulankii New York City FC ee ka dhanka ahaa ...
Real Madrid oo isku diyaarineysa u dhaqaaqista Sergio Aguero.
Muqdisho – Real Madrid ayaa lagu soo warramayaa inay isku diyaarineyso dalab ay u direyso weeraryahanka Manchester City, Sergio Aguero. Aguero ayaa noqday ciyaaryahanka ugu goolasha badan City markii uu dhaliyay goolkiisii 178-aad kulankii ay 4-2 kaga badiyeen Napoli ee ...
Ousmane Dembele oo soo laaban kara kulanka El Clasico.
radio himilo November 6, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 28 Views
Muqdisho – Xiddiga kooxda Barcelona, Ousmane Dembele ayaa lagu soo waramayaa inuu line-upkiisa ku soo laaban doono kulanka El Clasico ee kooxdiisu la ciyaarto naadiga ka dhisan caasimadda Spain ee Real Madrid. Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Faransiiska ayaa kusoo ...
Muslim aashito lagu soo weeraray oo aan dib danbe wax u arki doonin.
radio himilo November 6, 2017	Features, Wararka Leave a comment 51 Views
London – Muslim cunna-geeye ah ayaa nolosha la halgamaya kadib markii weerar aashito ah uu laba indhood wax-yeelo kasoo gaarsiiyay. Marka loo eego Independent, laba qof ayaa kusoo dhawaaday Muhammed Nawshad Kamal, oo 32 jir ah, isaga oo maraya xaafadda Walthamstow area ee ...